Vaovao - ny fomba fametrahana ny fametahana volotsangana
Strand Tenona Banana Decking D Series
Bamby Decking DF021
Bamby Decking DF121
Bamby Decking DF321
Bamby Decking DF621
Strand tenona volobe Decking M Series
Bamby Decking MF021
Decking volotsangana MF121
Bamby Decking MF321
Baku Decking MF621
ny fomba fametrahana ny fametahana volotsangana
Ny gorodona volotsangana mavesatra dia antsoina koa hoe gorodona vita amin'ny landy. Izy io dia vita amin'ny kofehin'ny volotsangana avo lenta ary noteren'ny teknolojia avo lenta an'arivony taonina. Ny fisafidianana an'io karazan-kazo volotsangana io dia voadio kokoa noho ny an'ny volotsangana mahazatra. Izy io dia karazan-kazo vita amin'ny volon'olombelona vaovao vita amin'ny volotsangana, maka ny volotsangana ho akora ary voahodina arakaraka ny fitsipiky ny fizotran'ny hazo natambatra. Misy mombamomba efatra an'ny decking volotsangana REBO:
1. MF021 / DF021: famolavolana fisaka
2. MF121 / DF121: famolavolana endrika ambonin-drivotra kely
3. MF321 / DF321: famolavolana endrika ambonin-drivotra lehibe
4. MF621 / DF621: famolavolana endrika ambony etona kely
Afaka mifidy ny fomba tiany ny mpanjifa.
Mba hametrahana tsara kokoa ny fametahana volotsangana any ivelany dia misy kojakoja ilaina:
1. Joist:toy ny fototra alohan'ny fametrahana ny decking. Hazo, vy, akora volotsangana, mety daholo, na inona na inona ilainao.
2. Clips sy visy:fitaovana vy tsy misy fangarony. Ho an'ny fametahana sary, ny REBO dia manome soso-kevitra an'ny clip DC05 (sary voalohany), matanjaka kokoa izy amin'ny fihazonana, ny elanelana misy eo amin'ny zana-kazo roa dia eo amin'ny 6-7mm. Ho an'ny clip miampita, azonao ampiasaina ny DC06 (sary faharoa) hahazoana mijery tsara aorian'ny fametrahana.
4. Tape vy
5. Haavo fanahy
6. Hammer fingotra
7. Mpamily visy herinaratra
1. Alohan'ny hametrahana azy dia tazomy amin'ny toerana maina sy alokaloka ireo vokatra, sorohy ny tara-masoandro sy ny orana.
2. Alohan'ny hametrahana azy dia diovy ny toeram-piasana, alao antoka fa fisaka sy milamina ny fotony, malama ny lakan-drano ary mifanaraka amin'ny takian'ny famolavolana fananganana.
3. Ireo mpiray dia tokony hapetaka amin'ny vatan-kazo simenitra na tile-simenitra. Hamarino tsara ny hantsana 1-2 degre amin'ny haavony mba handraraka rano.
4. Ny elanelana misy eo amin'ireo mpiray dia tsy maintsy eo anelanelan'ny 450 ka hatramin'ny 500mm. Amin'ny alàlan'ny tokotanin'ny 1860mm halavany dia mila mpiorina min.5.
5. Tokony ho 80-150mm ny elanelana eo amin'ny gorodona ka hatrany amin'ny farany ambany.
Ireto ny Guilds Installtion ho referansa:
1. Ny fametrahana fototra: fomba roa hanovozan-kevitra
1) Minimum: Tela-simenitra eo ambanin'ny patotra
2) Matihanina: Mampiasà rojo sosona roa sosona amin'ny tile-simenitra ho fitoniana maharitra
2. Ny loha mifampitohy: REBO volavolan-kazo vita amin'ny volotsangana dia natao miaraka amin'ny lohan'ny lela sy ny otelo, ka azo atambatra mora foana ireo zana-kazo roa.
3. Fomba fametrahana amin'ny sisiny: Afaka mampiasa DC 06 ianao amin'ny fiatombohana sy famaranana. ny tabilao dia azo atambatra mora foana.
4. Ny fametahana amin'ny lavaka simetrika amin'ny lafiny roa dia azo amboarina miaraka amin'ny clip DC05 amin'ireo mpiray. Ny elanelana misy eo amin'ny solaitrabe dia manodidina ny 6-7mm aorian'ny fametrahana.
Eto ny mpanjifa sasany dia hafangaro momba ny elanelana misy eo amin'ny takelaka roa. Maninona no tokony hisy elanelana kely eo amin'izy ireo? Araka ny fantatsika, ho an'ny fametahana ivelany, dia hisy ny fisondrotana sy ny fihenan'ny tahan'ny masoandro sy ny orana, noho izany ilaina ny mamela elanelana kely ho an'ireo zana-kazo hifanaraka amin'ireo toetrandro samihafa.
Raha mila fanazavana fanampiny, azafady mifandraisa aminay ~
Adiresy: No. 175, National Rd 319, Nanjing High-tech Zone, Zhangzhou, Fujian